Myanmar Military and USDP should not start another round of Anti-Muslim Riots after defeating in this By Election | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« By election in Myanmar 2012
DOUBLE BLOW TO MYANMARS in Malaysia »
Myanmar Military and USDP should not start another round of Anti-Muslim Riots after defeating in this By Election
(Opposition leader Suu Kyi wins Burmese parliament seat, party says: The victory, if confirmed, would markamajor milestone in the Southeast Asian nation, where the military has ruled almost exclusively forahalf-century.)
After looking at the overwhelming votes NLD get in 1990 and the present By Election, President U Thein Sein should just understand that there isastrong possibility that his party would be badly defeated in the next General Election 2015.
To prevent the total annihilation he could engage inareverse gear and repeated their failed suppression of NLD and Daw Suu, which could lead to severe punishment by the world and the backlash by the people of Myanmar.
He needs to think out of the box “to see the son coming back carrying the gold pot” (Thar Shwe Oh Htan Lar Tar Myin Ya) as in the famous Thu Wanna Thar Ma Jattaka.
We wish to see Daw Suu led NLD, military affiliated USDP continue to exist and work together for the benefit and progress of the Myanmar and all the citizens.
I hereby propose U Thein Sein to consider joining his Union Solidarity and Development Party under the NLD umbrella and formaCoalition Government.
To show the sincerity and good will, he should:
Propose to appoint Daw Suu as the Prime Minister (of course amend the constitution) or
Propose to appoint the President post. Or
Appoint Daw Suu as his official adviser, the post to be powerful above all the Deputy Presidents and Ministers. Or
He just continues to stay as the President but agrees to listen, follow and implement the policies implemented by the political leadership of NLD CEC. Or
Appoint the new Coalition Cabinet with NLD MPs.
If USDP could madealong term agreement to sincerely join NLD and just requests to havearight to choose its members to be fielded under NLD, there isagood future for our country.
Our country need both Daw Suu led NLD and support of Myanmar Military affiliated USDP.
Daw Suu led NLD would grant us with Democracy, Good Governance, Foreign aids, cooperation and investments.
But we still could not ignore or need the Myanmar Military affiliated USDP for our country’s stability, security, their experience and Government Machinery.
This entry was posted on April 3, 2012 at 8:51 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
8 Responses to “Myanmar Military and USDP should not start another round of Anti-Muslim Riots after defeating in this By Election”
April 3, 2012 at 2:16 pm | Reply
Burmese government says it was surprised by scale of Suu Kyi victory @ http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/burmese-government-says-it-was-surprised-by-scale-of-suu-kyi-victory/2012/04/02/gIQAnnpHrS_story.html?socialreader_check=0
RANGOON, Burma — The Burmese government was surprised by the scale of arch-rival Aung San Suu Kyi’s win in parliamentary elections, the president’s chief adviser acknowledged Monday, one day after the democracy advocate’s party apparently securedaresounding victory.
Suu Kyi’s party said it had won 43 of 45 contested seats in the landmark election. The results, said reformist President Thein Sein’s chief adviser, proved that this Southeast Asian nation is capable of holding fair elections and that it is time for the U.S. government to lift sanctions on Burma.
“I think the Obama government, they are starting to believe that we are really changing, but we need to convince the other guys in Congress,” the adviser, Ko Ko Hlaing, said in an interview atagovernment office in Rangoon.
Although Sunday’s result hardly dents the government-backed party’s huge majority in the Burmese parliament, it means that Suu Kyi will face off against military-backed officials for the first time within the country’s new and evolving political establishment.
U.S. officials said Sunday’s poll, the first involving Suu Kyi in 22 years, representsasignificant step, despite reports of some campaign and election irregularities.
“There are tangible moments that demandatangible response to support ongoing reform,” saidasenior U.S. administration official, who was not authorized to speak by name.
But what exactly the United States should offer is still under discussion within the Obama administration, as isatimetable for rolling out such rewards.
The government could offer visa waivers for Burmese officials now banned from traveling to the United States; nominateaU.S. ambassador to Burma, as promised earlier this year; lift minor sanctions by presidential order; or initiate military exchanges.
A more dramatic action would be lifting U.S. sanctions barring foreign investment in Burma and imports from the country — moves that the Obama administration and Congress are unlikely to make until more permanent reforms appear to take hold.
U.S. officials say they are watching to see how the election plays out — first on Sunday, when the results are officially announced, and then later in April, when the new additions to parliament, including Suu Kyi, are seated.
“For now, people on the Hill are open to giving small things that are reversible,” said one congressional aide, who spoke on the condition of anonymity to describe internal discussions in Congress. “I don’t think there’s any appetite yet for lifting the major sanctions.”
The most immediate reward is likely to be visas for Burmese officials. Burma’s health minister, Pe Thet Khin, is scheduled to bringadelegation Sunday to visit Johns Hopkins University to discuss possible public health partnerships, according to those coordinating his visit.
And Burma is making arrangements forasecond high-level delegation to Washington to argue its case on sanctions, according to democracy advocates.
Suu Kyi struckaconciliatory tone Monday in Rangoon, tellingasmall crowd of supporters outside her National League for Democracy headquarters that Sunday’s election had beenatriumph, not only for her party but for ordinary voters.
April 3, 2012 at 2:17 pm | Reply
CONTINUED: “We hope that this will be the beginning ofanew era, when there will be more emphasis on the role of the people in the everyday politics in our country,” she said.
There is no sign that the government plans to annul Suu Kyi’s win, as it did after her emphatic general election victory in 1990. Suu Kyi spent 15 of the next 21 years under house arrest.
Burma, also known as Myanmar, is entering unfamiliar territory, both for Suu Kyi and foranominally civilian government that remains dominated by the military. The president’s adviser, Ko Ko Hlaing, acknowledged that the government is not used to contesting elections.
“I could guess that the NLD would take the lion’s share in these elections, but I didn’t expect this much ofalandslide victory for them,” he said. “The people are quite excited about this electoral process, and they would like to show their mind and hope for change.”
Speaking about the president’s relationship with Suu Kyi, he said that although the two had met in person only once, the leaders representing opposite sides of Burma’s rapidly diminishing political divide had builtastrong understanding based on actions rather than words. Representatives of the two sides were in regular contact, he said.
“I think Suu Kyi is usingamore conciliatory way to cooperate with the government,” he said. “At the same time, she has the right to move freely in her party political activities, so I think that the government understands her moves and is quite confident they will be within the law.”
The president’s chief adviser said the government remained intolerant of “demanding revolutions to topple the government,” which he likened to the Arab Spring.
Suu Kyi came to prominence in Burma when, as the daughter of the country’s independence hero Aung San, she became the leader of anti-government demonstrations that swept Rangoon in 1988. Since then Burmese activists have intermittently taken to the streets of the country’s largest city, often when Suu Kyi herself has been under house arrest, including in 2007 when demonstrations by monks were brutally suppressed.
Ko Ko Hlaing said that the country will continue to reform as it moves toward general elections at the end of 2015.
Sunday’s election “is the preliminary test for democratic transition, and the general elections in 2015 will be the final exam,” he said.
Wan reported from Washington.
From Gorbachev to Thein Sein — Tay Tian Yan @ http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/from-gorbachev-to-thein-sein-tay-tian-yan/
April 04, 2012 APRIL4— Aung San Suu Kyi won 99 per cent of votes in the Myanmar by-elections,arecord in the history of democratic elections.
If things were to go as planned, Suu Kyi’s National League for Democracy is sure to win the 2015 general election, and she will be made Myanmar’s first female president.
To the Burmese people, it’sablessing ofalifetime.
But waitaminute! Will things always go as planned? Will the transition go really that smoothly?
To the military regime today, this thing could beahorrible turn.
These people take control of all of Myanmar’s resources, from mining resources to natural gas, as well as majority of national corporations. Even in impoverished Myanmar, these people lead luxurious lives fit for the kings.
When I visited the country several months back, local people told me these privileged people and their children were frequent visitors to plush casinos worldwide, and they bought up real estate in London, Singapore and Hong Kong. They also had in their possession the most luxurious sports cars.
Under the wind of change, these people may see their powers dissipate inashort span of three years, along with all the monetary gains that come with the powers. More disturbingly, troubles may come after them soon.
Like the dogs that are forced to the wall, do you think they will surrender themselves while they still have the powerful capacity to strike back?
Not very likely, with the guns still in their hands.
This is why I cannot be totally optimistic of Myanmar’s future.
Suu Kyi’s biggest challenge is not to win the election, but how she would deal with the power that is, so that they would hand over their authority in peace.
We need to thank President Thein Sein for making democracy possible in Myanmar.
Thein Sein isafunny man and, most possibly,agreat man as well. He was born inamilitary family and has thus inherited the power. However, he took off his military outfit to formacivil government.
He amended the constitution so that Suu Kyi could now take part in the elections. He allowed some degree of freedom of speech and allowed people to assembly freely. He initiated the reform agendas so that the country could move closer to democracy and embrace market economy.
Something that is good for the country may not be good for the military junta. There is no turning back now. He will have to hand over his baton. His political party is poised for total disintegration and his regime’s days are numbered.
What happens in Myanmar today isareplay of Soviet Union under Mikhail Gorbachev.
The Soviet economy was in tatters when Gorbachev took over as president. The government had lost the favour of the public and the country was not run properly.
If Gorbachev wanted to remain firmly in power, he could have followed the iron fist policies of Leonid Brezhnev, or the lacklustre performance of Yuri Andropov, or the stagnancy of Konstantin Chernenko.
Given the muscle of the Soviet Union, it wouldn’t problem for the regime to go on for another ten or twenty years.
But Gorbachev took the drastic turn, implementing Glasnost and Perestroika to open up and reform the country, resulting in the demise of the Communist Party and the dismantling of USSR.
If he could turn back time, would he take the same path again? No one can tell, because he was unprecedented.
Thein Sein is different. With the Soviet experiences in hand, he is well aware of the inevitable trends of history.
He deservesasalute if he would persist in his open policy, sacrificing himself for the sake of his nation. — mysinchew.com
Complaint letter to the President U Thein Sein about damaging of Masjids by local authorities, USDP and NLD members « Dr Ko Ko Gyi’s Blog Says:
April 15, 2012 at 10:01 am | Reply
[…] U Thein Sein should consider joining his USDP under the NLD umbrella (drkokogyi.wordpress.com) […]
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Landslide ကြီး အနိုင်ရအောင် လုပ်ခဲ့မိတာကိုးက NLD ရဲ့ အမှား…
နည်းနည်းပါးပါး ကွက်ကျန်လေး ချန်ထားပါတော့လား..
ပြိုင်ဘက် အာဏာရ သောက်ကျင့်ယုတ် အရှက်မရှိ အာဏာရဖို့ အကုန်လုပ်မယ့် ပါတီကို
ခပ်ပေါပေါ နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေ စိမ်ပြေနပြေ ကြိုလုပ်ဖို့ သတိပေးလိုက်သလိုပဲ… !
March 20, 2015 at 8:03 am | Reply
(၂၀၁၂) ဧပြီ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးချိန်၊ ဒီမိုကရေစီပါတီကြီးနောက်မှာ လူထုထောက်ခံမှု အပြည့်ရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း မဲရလဒ်တွေကတဆင့် ထင်ထင်ရှားရှား ပြသပြီးချိန်ကစလို့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တိုင်းပြည်မှာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ပိုမိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ဘာသာရေး/လူမျိုးရေး အကြောင်းပြ သွေးထိုးသွေးခွဲ စိတ်ဝမ်းကွဲစေပြီး အုပ်ချုပ်ရလွယ် အာဏာတည်တံ့လိုမှု၊ ဖိနှိပ်လိုသူ အစိုးရဘက် လူထု မလှည့််အောင် လူနည်းစု တရုတ်၊ အိန္ဒိယ အနွယ်တွေကို ဓားစာခံလုပ် ချကျွေး ရန်တိုက်ပေးမှု အစရှိသလို နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နောက်ကွယ်က စနစ်တကျ ဖန်တီးထားတယ် ဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှိပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တလျှောက် နိုင်ငံရေး ပယောဂ အနည်းအများ ရှိတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားတဲ့ အချက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ (၂၀၁၄) ဇူလိုင် လဆန်းမှာ လူသေတဲ့အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မန္တလေး ဖြစ်စဉ်မျိုးကျ ပယောဂကပ်ခြင်း ဆိုတာနဲ့ မလုံလောက်တော့ပါ။
ဒီလို လူမျိုး/ဘာသာ ဆက်စပ် အမြင်မကြည်လင်မှု အမုန်း၊ ရန်ပွဲတွေမှာ နိုင်ငံရေးဂယက် ဘယ်လောက်ပါတယ်ပဲ ဆိုဆို မန္တလေးလို ရှေးပဒေသရာဇ် မင်းနေပြည်တော် လက်ထက်ကတည်းက လူမျိုး၊ ဘာသာစုံ ချစ်ကြည် ဥမကွဲ သိုက်မပျက် နေလာခဲ့တဲ့ နေရာမျိုးရဲ့ သမမျှတမှု ဓလေ့ကိုပါ ထိပါးလာခဲ့ခြင်းဟာ တိုင်းပြည်မှာ လူမျိုး မတူ၊ ဘာသာ မတူ သူ ကြား ထားရှိတဲ့ အမြင် အမုန်းတရား တွေဟာ ကြီးထွားလာခဲ့ပြီ ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။
ဒီအမုန်းတရားတွေ ချေဖျက်ဖို့ရာ ဘာသာစုံ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ခေါင်းဆောင်တွေ ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဒီထဲက တခုကတော့ အလှူပွဲတွေပါ။ အခုနှစ်ပိုင်း သွေးနံ့၊ မီးခိုးနံ့တွေသင်းတာများလာတော့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဘာသာရေး ဆက်စပ် အလှူပွဲ သတင်းတွေ ခပ်စိပ်စိပ် ဖတ်လာရပါတယ်။ ဗမာမွတ်ဆလင်တွေက ဝါကျွတ် အီဒ် ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်လို၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ အခါကြီး ရက်ကြီးလို မျိုးတွေမှာ သံဃာတော်တွေကို ဆွမ်းကပ် ကုသိုလ်ပြုရင်း လေးစား ချစ်ကြည်သမှုကို ပြကြတာ သတိထားမိပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဆိုရင် စင်ပေါ်တက် စကားမပြော မဟောရဘူး ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး အထိ ဦးပဉ္စင်း တချို့နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ ကန့်ကွက်ခြင်းလို သဘောထား သေးသိမ် အမြင် ကျဉ်းမြောင်းမှုများကလည်း မပြတ်မြင်နေရသေးပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းပြကြတာကတော့ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြားတွေ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် သူတို့ကို နေရာပေး စင်ပေါ် မတင်ရဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒီမှာ နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိတာမှန်ပေမဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာ ကွဲတာနဲ့ တိုင်းပြည်မှာ အိမ်ခံ ဇာတိ မဟုတ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ လူအများကြားမှာ ကျယ်ပြန့် နေခြင်းဟာ ငြင်းမရပါ။ သြဇာကြီးတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတချို့တောင် ဒီလို သဘောမျိုး မိန့်ကြားတတ်ပါတယ်။
ဒီလို အခြေခံသဘောမှာ လူမျိုး၊ ဘာသာမတူတာကြောင့် အိမ်သည် အဖြစ် လက်ခံလိုစိတ်မဲ့နေပြီ ဆိုရင် ဘာသာစုံ ချစ်ကြည်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ အလှူ ပွဲ တွေဟာ အကျိုး ရှိသင့်သလောက် မရှိနိုင်၊ အလုံးစုံ အမုန်းတရားကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ အားနည်းနေဦးမှာပါ။
အမှန် မြင်နိုင်ရမယ့် အချက်က တိုင်းပြည်မှာ မှီတင်းနေထိုင်နေသူ လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာခြား ခရစ်ယာန်၊ မွတ်ဆလင်၊ ဟိန္ဒိူ၊ နတ်ကိုးကွယ်သူ၊ ဘာသာရှိ၊ ဘာသာမဲ့၊ လူမျိုးစုံ နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အိမ်ဟာ ဒီတိုင်းပြည်တခုတည်း ဆိုတာကိုပါ။ အခု ဖြစ်နေတဲ့ အဓိက ပြဿနာ က လတ်တလော အခြေချ နေထိုင်သူများနဲ့ ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ပါ။ ဒီတိုင်းပြည်မှာ နှစ်ရာချီ အခြေချ နေထိုင် နေကြသူတွေကို အိမ်ကြက်ချင်း အိုးမည်းသုတ် အမုန်းပွားချင်နေကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၄) ခု ရဲ့ အကြီးဆုံး ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးဖြစ်စဉ်ကိုပဲ ဥပမာ ကြည့်ပါ။ လူမျိုး၊ ဘာသာ မတူတာနဲ့ ဓား တယမ်းယမ်း၊ တုတ်တပြက်ပြက် သတ်ချင် ဖြတ်ချင် မီးရှို့ချင် ဖြစ်နေတဲ့ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြီး နောက်ခံ ဟာ တကယ့် မန္တလေး ပုံရိပ် အစစ်အမှန် မဟုတ်ပါ။
မန္တလေး (၁၈၅၇ တည်) ဟာ ပထဝီ ဒေသ အနေအထား အရ အချက်အချာ ကျတဲ့ နေရာ ဖြစ်တာကြောင့် စတင် တည်ထောင်စဉ် ကာလ (၁၉) ရာစုမှာကတည်းက လူမျိုး၊ ဘာသာစုံ မှီတင်းနေထိုင်ခဲ့ခြင်းနဲ့ အတူ အရှေ့တောင်အာရှ ရဲ့ ထိပ်တန်း အယူဝါဒ ယဉ်ကျေးမှု စုံ ထွန်းကားရာ မင်းနေပြည်တော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ယိုးဒယား၊ လင်းဇင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ကသည်း၊ မဏိပူ၊ တရုတ်၊ ပန်းသေး၊ အာရပ်၊ ပါရှန်၊ ဖာရာစီ၊ ပသီ၊ မဟာမေဒင်၊ ဖရန်းစစ်၊ ပူတကေ၊ အီတာလျံ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျူး၊ အာမေးနီးယန်း အစရှိတဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာ စုံ မြို့တည် နန်းတည်ကတည်းက အတူတကွ အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ။
ဒီသဘောဟာ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ရဲ့ ဗဟုဝါဒ ထွန်းကားရာ ဓလေ့ကောင်း တခုလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် တည်ထောင်သူ အလောင်းဘုရား (နန်းစံ ၁၇၅၂-၁၇၆၀) ခေတ်ကတည်းက ဗမာမွတ်ဆလင်တွေလို လူနည်းစုဝင်များဟာ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ကွဲပြားပေမဲ့ နိုင်ငံရေးရာတွေမှာ နေရာရခဲ့ပါတယ်။ ဆဋ္ဌမမြောက် မင်းဆက် ဘိုးတော်ဘုရား/ဗဒုံမင်း (နန်းစံ ၁၇၈၂-၁၈၁၉) လက်ထက်မှာ ဗမာမွတ်ဆလင် တွေကို မင်းပြန်တမ်းတွေမှာ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး မွတ်ဆလင် ဆက်စပ် အချင်းကြီး အချင်းငယ် များ ဖြေရှင်းဖို့ရာ သီးသန့် တရားရေးရာ ဝန်ကြီး ရာထူးများ ခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယ စစ်ပွဲ (၁၈၅၂-၁၈၅၃) မှာ ဗမာမွတ်ဆလင်တွေ တိုင်းပြည်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ ကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေး ရတနာပုံခေတ်မှာ မင်းတုန်းမင်း (နန်းစံ ၁၈၅၃-၁၈၇၈) ဟာ မွတ်ဆလင်များ အတွက် သာသနိက အဆောက်အအုံများ၊ လူနေရပ်ကွက် မြေနေရာများ (ဥပမာ – ကွမ်းရိုးတန်း၊ ပန်းသေးတန်း၊ ကုလားပျိုရပ် အစရှိသလို) သတ်သတ်မှတ်မှတ် ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် စစ်မှုထမ်း တပ် သီးသန့် ရှိတယ်။ ဗမာမွတ်ဆလင်များစွာ အုပ်ချုပ်ရေး ရာထူးကြီးများ ရခဲ့ပါတယ်။
မင်းတုန်းမင်းဟာ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းလှပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ စည်ပင်ထွန်းကားအောင် အထူး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီ ပီပီ ဘာသာစွဲ မကြီးဘဲ မင်းမှုထမ်း ဘာသာ လူမျိုး ကွဲများ၊ ကုန်သည် စီးပွားလာရောက် ပြုသူ နိုင်ငံခြားသားများ နဲ့ သာသနာပြုများ၊ သံတမန်များ အားလုံးကို ခရစ်ယာန်၊ မွတ်ဆလင်၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဥရောပ မခွဲ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့်၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး ဓလေ့ ကျင့်သုံးခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ မင်းမှုထမ်း ဗမာမွတ်ဆလင်များ အရှေ့အလယ်ပိုင်း မက္ကာ အရပ် ကို သာသာနာ ခရီး ထွက်နိုင်ဖို့ရာတောင် အကူအညီ ပေးခဲ့တယ် ဆိုပါတယ်။
ဗမာမွတ်ဆလင်များကလည်း ကုန်းဘောင်မင်း အဆက်ဆက် တိုင်းပြည် ကို သစ္စာရှိရှိ စစ်မှုထမ်းခြင်း၊ ကုန်သည်၊ စီးပွားပြု အခွန်ထမ်းခြင်းဖြင့် ပြန်လည် တာဝန် ကျေပွန်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းတုန်းမင်း (၁၈၀၈-၁၈၇၈) နဲ့ ကနောင်မင်းသား (၁၈၂၀-၁၈၆၆) ရွှေဘိုထွက် နောင်တော် ပုဂံမင်း (နန်းစံ ၁၈၄၆-၁၈၅၃) ကို ပုန်ကန်စဉ်ကတည်းက နောက်လိုက် ကျွန်ယုံ အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာ ဦးဘိုး၊ ဦးရွဲ အစရှိတဲ့ ဗမာမွတ်ဆလင်များ အများအပြား ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး မင်းဆက် သီပေါမင်း (နန်းစံ ၁၈၇၈-၁၈၈၅) လက်ထက် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ တတိယစစ်ပွဲ မင်းလှခံတပ် တိုက်ပွဲလိုမျိုးတွေမှာ ဗမာမွတ်ဆလင် အမြောက်တပ်၊ ခြေလျင်တပ်များ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ အစွမ်းပြခဲ့ကြပါတယ်။
အလားတူပဲ တရုတ်အမျိုးသားများ၊ ဥရောပ အနွယ်များလို အခြား လူမျိုးခြား အခြေချနေထိုင်သူများဟာ မင်းမှုထမ်း၊ ကုန်သည် ပွဲစား၊ သာသနာရေး၊ ပညာရေး ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ကုန်ဘောင်နန်းဆက်တလျှောက် တိုင်းပြည် အကျိုးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သမိုင်းကို အစွဲကင်းကင်းနဲ့ လေ့လာသုံးသပ် မှားတာတွေကို သင်ခန်းစာယူ၊ ကောင်းတာတွေကို အတုယူနိုင်မှ အနာဂတ်ကို အကောင်းဆုံး တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။
မန္တလေးရဲ့ သမိုင်းပုံရိပ် အစစ်အမှန်က ဆိုခဲ့သလိုပါ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကောင်းသမိုင်းကလည်း အဲဒီလိုပါ။ လူအများ ထောက်ခံမှုရစေဖို့ တမျိုး၊ တဘာသာ အားပြု ချီးမြှင့်၊ အစွန်းရောက် အမျိုး၊ ဘာသာ စိတ် လမ်းကြောင်းတဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး ရာစုဝက်ကျော် လွှမ်းမိုးခံရပြီးချိန် အခု မျက်မှောက်ခေတ်မှာတော့ မန္တလေးလို သမိုင်းရှိတဲ့ မြို့ပါ မကျန် လူမျိုး/ဘာသာ အဓိကရုဏ်းတွေ ဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရသလို အခုအချိန်မှာ ဗမာမွတ်ဆလင်များက ဗုဒ္ဓသံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ်ခြင်းလို ကိစ္စမျိုးကို အရေးတယူ လုပ်၊ သတင်းတောင် ဖြစ်နေရပါတယ်။ ချစ်ကြည်ရေး ခေါင်းစီးအောက်မှာ မဖြစ်မနေ သဘော လုပ်ပြနေရလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မန္တလေးရဲ့ နှစ်ပေါင်း (၁၅၈) နှစ် သမိုင်းမှာ ဗမာမွတ်ဆလင်တွေ အပါအဝင် လူမျိုး၊ ဘာသာ ကွဲ အားလုံးဟာ မြန်မာ့ရိုးရာ ပွဲတော်များ၊ ကထိန်၊ ရှင်ပြုလို ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဆက်စပ် ဓလေ့များကို မြန်မာများနည်းတူ အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ခဲ့ကာ အလှူဒါန ပြု၊ ကုသိုလ် ဝေမျှ ယူကြတာ ထုံးစံပါ။ လူမျိုး ဘာသာအခြေပြု ဓလေ့ သဘော မဟုတ်ဘဲ၊ “ဒေသ ဓလေ့” အနေနဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ်ကတည်းက အစဉ်မပြတ် တည်ရှိလာခဲ့တာပါ။ မန္တလေးမှာဆိုရင် မွတ်ဆလင်များ ဘုန်းကြီး ဆွမ်းကပ်ခြင်းဟာ အထူးအဆန်း မဟုတ်၊ မန္တလေး ဓလေ့၊ မန္တလေး ထုံး ဖြစ်သလို ဗမာ့သမိုင်းရဲ့ မတူကွဲပြားခြားနား ယဉ်ကျေးမှုများ သမညီညွတ် မျှတ ဗဟုဝါဒ ထွန်းကားခဲ့ခြင်း ပြယုဂ် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင့် ဗမာ မွတ်ဆလင်များ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာ ရဲ့ ထမ်းဆောင်ရမယ့် အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး (၅) ခု မှာ အလှူဒါန ပြုခြင်း တခု ပါပြီး ငွေကြေးခိုင်လုံသူ မွတ်ဆလင်များ မဖြစ်မနေ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရမယ့် ကျင့်ဝတ်တာဝန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စုဆောင်းငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက် ကို ပုံမှန် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲနေရမယ် ဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်း ထားပါတယ်။ တတ်နိုင်သူများ အနေနဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ပြင်ပ အလှူမျိုးစုံကို လိုအပ်နေသူများ အတွက် ဘာသာ၊ လူမျိုး မခွဲ ပြုလုပ်အပ်တယ်လို့လည်း လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလိုပဲ အစ္စလာမ် ဗမာမွတ်ဆလင် များဟာ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာ အမြဲ ရှိကြတယ် ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုနောက်ခံမှာ အခု မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အလှူဒါနပြု ဆွမ်းကပ်ခြင်းမျိုးဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် အစဉ်အလာအရပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ လူမျိုး၊ ဘာသာ မခွဲ ချစ်ကြည်ရင်းနှီ စိတ်အခံအပြည့်နဲ့ သဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာ ကုသိုလ်ယူတာမျိုးပဲ ဖြစ်ရပါမယ်။ လူမျိုး၊ ဘာသာစိတ် ပြင်းထန်တဲ့ ကိုယ်တော်တချို့ ကြိမ်းဝါး ဟောကြားခဲ့ဖူးတဲ့ “မန္တလေးက မွတ်ဆလင်များ နေစရာ၊ စားစရာ မရှိအောင် လုပ်ပြမယ်” ဆိုတဲ့ အမုန်းစကား ခြောက်လှန့်မှုတွေရဲ့ ရလဒ် ဘေးဥပဒ် ကင်းရှင်းလိုတာကြောင့် အနှာင်အဖွဲ့နဲ့ ပြုလုပ်ရတဲ့ “ဘယာဆွမ်း” မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်မှာ ရာစုနှစ်ချီ တည်ရှိလာခဲ့တဲ့ ချစ်ကြည်ရေး အစဉ်အလာ မပျက်တဲ့ ကောင်းမှု ကုသိုလ် ပြုပွဲ သန့်သန့်လေးပဲ ဖြစ်စေရပါမယ်။ အကြမ်းဖက်မှုများ ကျယ်ပြန့်လာခြင်းကြောင့် လူနည်းစု အုပ်စုဝင်များ စိတ်မလုံခြုံမှု ခံစား၊ အကြောက်တရား လွှမ်းမိုးကာ အနာတရ စိတ်ဒဏ်ရာ အခြေခံနဲ့ ပြုလုပ်နေရတဲ့ အလှူမျိုး မဖြစ်စေလိုပါ။ ဗဟုယဉ်ကျေးမှုကို ပဒေသရာဇ်မင်းတွေခေတ်ကတည်းက ရင်ဘတ်ကျယ်ပြန့် နှလုံးသားကြီးကြီးနဲ့ လက်ခံလာခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ် ကောင်းဂုဏ်တွေကိုလည်း မယုတ်လျော့စေလိုပါ။ အခုအချိန်ကျမှ အိမ်ရှင်-ဧည့်သည် မခွဲစေလိုပါ။ ဘာသာကွဲ၊ လူမျိုခြားတွေမို့ ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသား “ဧည့်သည်” တွေ အဖြစ် နေကြ မလုပ်အပ်ပါ။
ဘာသာရေး အစွန်းရောက် လိုသူများကတော့ အစ္စလာမ်၊ ဗုဒ္ဓနဲ့ အခြား ဘာသာတိုင်းမှာ အစိတ်အပိုင်း တခုအနေနဲ့ အနည်း အများ ရှိကြမှာပါပဲ။ အစွန်းရောက် တရားများ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မရှင်သန်၊ မတိုးပွား၊ အမြစ် မတွယ်အောင်သာ အစိုးရ၊ ပညာရေး စနစ်၊ စာနယ်ဇင်း၊ အနုသုခုမ ကဏ္ဍာ အစုံစုံ က ဝိုင်းဝန်း ဖေးမ ထိန်းကျောင်း ပြုပြင်ရပါမယ်။ နိုင်ငံသား အားလုံးကလည်း ဘာသာ၊ လူမျိုး မကြည့်ဘဲ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု ပကတိ သဘော လူသားဝါဒ မေတ္တာ အခြေခံကာသာ တိုင်းပြည် ငြိမ်ချမ်းရေး တည်ဆောက်၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ချမ်းသာရေး ဖော်ဆောင်ရမှာပါ။
လူမျိုး၊ ဘာသာပေါင်းစုံ မှီတင်း နေထိုင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို မျှော်ကြည့်ရင်း လက်ရှိ မျက်မှောက် အနေအထား ကို သုံးသပ်ရရင် ဘာ ပယောဂ ကြောင့် ဆိုဆို လူ့အသိုင်းအဝန်းမှာ အမုန်းတရားတွေ တိုးပွားနေဆဲပါ။ ဒီဆိုးကျိုးဆက် အဖြစ် လူနည်းစု ဘာသာခြားများ အစဉ်အလာ ထုံးစံ အရ စေတနာ သန့်သန့်ထား ရဟန်းတော်များ ကို ကပ်လှူ လေ့ရှိတဲ့ “သဒ္ဓါ ဆွမ်း” ဓလေ့ကနေ အကြောင့်အကြနဲ့ မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်နေရတဲ့ “ဘယာဆွမ်း” အဖြစ် ပြောင်းများ သွားပြီလား စိုးရိမ်နေမိကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
“ဘယာဆွမ်းတော့ မဖြစ်စေလိုပါ” / “သဒ္ဓါဆွမ်းလား၊ ဘယာဆွမ်းလား” ဆောင်းပါး —
(မိုးမခ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၉)၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၄ တွင် မူလ ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ အသစ်ဖြည့်စွက်မူကို မန္တလေး Friday Times News Journal အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၃)၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၂၇) သောကြာနေ့ထုတ်တွင်လည်း ထပ်မံ ထည့်သွင်းပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ ဆောင်းပါး ပါ အာဘော် နှင့် အချက်အလက်များကို ထောက်ပြ ဝေဖန်ရန် လွတ်လပ်စွာ မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါသည်၊ nyeinchanaye81@gmail.com သို့လည်း စာရေးနိုင်ပါသည်။)
ရည်ညွန်း စာများ –
– The Royal Gazette of Bodawpaya, Criminal Law Royal Decree, Volume (4).
– Konbaung Dynasty Royal History, Volume (3).
– The Muslims of Burma “A study ofaminority Group” by Moshe Yegar, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, (1972).
ဆက်စပ်ဆောင်းပါးများ ဖတ်လိုပါက —
သွေးစွန်းသော လက်များကို လက်ထိတ်ခတ်ဖို့ လိုနေပါပြီ (ဧရာဝတီ)
ကြောင်ချေးများကို အရင်ရှင်းပါ (ဧရာဝတီ / ဘက်မလိုက်)
ဗမာပြည်ကို ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ (ဧရာဝတီ)
Ooredoo ကို ဆန့်ကျင်သတဲ့လား (ဧရာဝတီ)
ဗမာပြည်မှာ နောက်လိုက်အများဆုံး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Hate Group (မိုးမခ / ဘက်မလိုက်)
စစ်ပွဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ကမ္ဘာ့ဘာသာ အယူဝါဒများ (မိုးမခ / ဘက်မလိုက်)
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရာ ရပ်ဝန်းလေးဆီသို့ (ဘက်မလိုက်)
အချစ်ဂျီဟဒ် ရှိသလား (မိုးမခ / Friday Times)
နာဇီ သားကြောဖြတ် ဥပဒေ အတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်လာတာ့မလား
Nyein Chan Aye ရဲ့ ဖဘ စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Myanmar Muslim Media ရဲ့ Android Application Link
July 11, 2018 at 10:08 am | Reply
The possible post-election political scenario of Myanmar politics
While thinking about the post-election political scenario of Myanmar politics, I suddenly visualizedavi
We have repeatedly seen in the movies aboutahostage held at the gun point from the back have to smile and say the exact words dictated by the hostage taker to the outside people directly or on the telephone or on video camera.
If Daw Aung San Suu Kyi had successfully won the confidence and trust of the Myanmar Military Generals…they may let her win the Election and form the government. Generals may use her as the HUMAN-SHIELD from the UN, ICC, US led West and OIC’s attacks.
Generals may let her go around the world asaFIGURE-HEAD to solicit aids and investments. But Min Aung Hlaing and Lt. General Ko Ko will continue to call the shots and do the real governing the country.
Daw Aung San Suu Kyi may just need to change some excuses, from the present “I have no power to do” to “Slow and Steady, it takes time, you cannot get to have clear pure drinking water just after digging the well…blur blur blur…
She will continue to ignore the Islamophobic Hate Mongers, allow to continue the Racist Criminal Ma Ba Tha and even Swarn Arr Shins. Rohingya issue, just the temporary new cards and tried to put on the back burner. Ethnic minorities’ demand for Federal Union and real peace process with rebels…another conference inaslow motion.@ https://drkokogyi.wordpress.com/2015/06/19/the-possible-post-election-political-scenario-of-myanmar-politics/
Myanmar Military and USDP started Anti-Muslim Riots after defeating in the By Election on 1st April 2012 အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဘဝ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရတာ ၂၀၁၂ ဧ Says:
May 20, 2019 at 8:27 am | Reply
[…] Myanmar Military and USDP should not start another round of Anti-Muslim Riots after defeating in thi… […]